မြောကျကလေး နှငျ့ သဈသားပနျးသီး
HomeKnowledgeမြောကျကလေး နှငျ့ သဈသားပနျးသီး
ဟိုးရှေးရှေးတုနျးက တောအုပျတခုထဲမှာ ပြျောရှငျနတေဲ့ မြောကျတကောငျရှိတယျ ။ သူဗိုကျဆာလာတဲ့ အခါ အရသာရှိတဲ့ သဈသီးတှေ စားလို့ သူမောလာတဲ့အခါ အနားယူလို့ အဲဒီ တောအုပျထဲမှာပဲ ပြျောမှနေ့ခေဲ့တယျ ။ တနတေ့ော့ သူဟာ မကျြစိလညျ လမျးမှားရငျး အိမျတလုံးဆီ ရောကျလာခဲ့တယျ ။
အဲဒီမှာ သူမွငျလိုကျရတာက အရမျးကို လှပတဲ့ ပနျးသီးတှေ ထညျ့ထားတဲ့ ပနျးကနျလုံးကွီးကို ပေါ့ ။ မြောကျကလေးဟာ အိမျရှငျတှေ အလဈမှာ လကျတဖကျကို ပနျးသီးတလုံးစီ ယူပွီး တောအုပျထဲ ပွနျပွေးလာခဲ့တယျ ။
မြောကျလေးဟာက ပနျးသီးကို နှာခေါငျးရှုံ့ပွီး အနံ့ခံတယျ ။ ဒါပမေယျ့ ဘာအနံ့မှ မရဘူး ။ ပွီးတော့ ပနျးသီးကို စားဖို့ ကွိုးစားတယျ ။ ဒါပမေယျ့ သူ့သှားတှေ နာကငျြပွီး စားမရလောကျအောငျ မာကွောနတေယျ ။ ပနျးသီးတှဟော တကယျတော့ သဈသားနဲ့ ပွုလုပျထားတာ ဖွဈတယျ ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့က အရမျးလှတယျ ။
တခွားမြောကျတှကေလညျး အဲဒီပနျးသီးတှေ မွငျတဲ့အခါ အလုအယကျ ပွေးယူဖို့ လာကွတယျ ။ အဲဒီအခါ ပနျးသီးပိုငျရှငျ မြောကျကလေးက သူ့ပနျးသီးတှကေို တငျးကွပျစှာ ပှဖေ့ကျထားလိုကျတယျ ။ ပွီးတော့ သူဟာ ဒီတောထဲမှာ သူ့ရဲ့ ပနျးသီး ပိုငျဆိုငျမှုအတှကျ ဂုဏျယူဝငျ့ကွှား နခေဲ့တယျ ။
ပနျးသီးတှကေ နရေောငျနဲ့ ကွညျ့တဲ့အခါ နီရဲ တောကျပွောငျနပွေီး သူ့ကို ပွညျ့စုံအောငျ လုပျပေးနတေယျလို့ မြောကျကလေး ခံစားနရေတယျ ။ ပနျးသီတှကေိုပဲ သူဂရုတစိုကျ ကွညျ့နပွေီး ပထမဆုံး သူဆာလောငျနတော ကိုတောငျ မလြေ့ော့သှား ခဲ့တယျ ။
သဈသီးပငျ တပငျက မြောကျကို သတိပေးတယျ ။ ဒါပမေယျ့ သူ့လကျထဲက ပနျးသီးတှကေ လှဲလို့ မြောကျကလေးဟာ ဘာကိုမှ ဂရုမစိုကျဘူး ။ သူစားဖို့ သဈသီးခူးဖို့ အတှကျ သူ့လကျထဲက ပနျးသီးတှကေို မွပွေငျပျေါ ခဏခရြမှာ ကိုတောငျ သူမခနြိုငျ ဖွဈနခေဲ့တယျ ။
တကယျတော့ သူ နားလညျး မနားရသလို သူ့ပနျးသီးတှကေို တခွားမြောကျတှေ လာလုယူမှာ စိုးတဲ့အတှကျ အခြိနျတိုငျး ကာကှယျနေ ရတယျ ။ ဂုဏျယူဝငျ့ကွှားမှု တခုအတှကျ အရငျက ပြျောရှငျနတေဲ့ မြောကျဟာ ပြျောရှငျမှုတှေ နညျးလာပွီး သဈတော တလြှောကျမှာ လြှောကျသှားနေ ခဲ့ရတယျ ။
ပနျးသီးတှဟော တဖွညျးဖွညျး လေးပငျလာသလို ခံစားလာရတယျ ။ သနားစရာကောငျးတဲ့ မြောကျဟာ ပနျးသီးတှကေို လှတျခလြိုကျဖို့ အတှကျ စဉျးစားတယျ ။ သူ မောနပွေီ သူ ဆာနပွေီ နောကျဆုံး သဈသီးပငျပျေါ တကျလို့ သဈသီးတှေ သူ မခူးနိုငျတော့ဘူး ။ သူ့လကျထဲမှာ စားလို့မရတဲ့ ပနျးသီးတှနေဲ့ပဲ ပွညျ့နခေဲ့တယျ ။
အကယျ၍ သူ့လကျထဲက ပနျးသီးတှကေို လှတျခလြိုကျရငျ သူ ဘာဆကျဖွဈမလဲ ? သူ့လကျထဲ သယျဆောငျထားတဲ့ ပနျးသီးတှကေ ရူးသှပျမှုတှပေဲလို့ သူမွငျလာတယျ ။ သူ အရမျးလညျး ပငျပနျးနခေဲ့ပွီး နောကျဆုံး အသီးပငျနား ရောကျတဲ့အခါ အဲဒီအပငျက သဈသီးရနံ့တှကေို သူ ရှုရှိုကျရငျး သူအရာရာကို နားလညျ သဘောပေါကျသှားတယျ ။
သူ့လကျထဲက သဈသားနဲ့ လုပျထားတဲ့ ပနျးသီးတှကေို သူ မွပွေငျပျေါ ပဈခလြိုကျပွီး သူ့အစာအတှကျ သဈသီးပငျပျေါ တကျသှားတယျ ။ သူ အခု ပွနျပွီး ပွုံးပြျောနိုငျပါပွီ ။
မြောကျကလေးလိုပဲ ကြှနျတျောတို့ဟာ တနျဖိုးရှိတယျလို့ ထငျမိတဲ့ အရာတှကေို ကြှနျတျောတို့ ဘဝတလြှောကျလုံး သယျဆောငျထား ကွတယျ ။
ဒီပုံပွငျလေးရဲ့ အဆုံးက ၂ ခု ဖွဈနိုငျတယျ ။ မြောကျဟာ နောကျဆုံး သဈသီးပငျ အောကျမှာ သူ့ပနျးသီးတှကေို မစှနျ့ပယျနိုငျလို့ ရငျမှာ ပိုကျရငျး သပှေဲဝငျသှား ခဲ့တယျ ။ နောကျတခု ကတော့ ကြှနျတျောအပျေါ မှာရေးခဲ့သလို ပနျးသီးတှကေို လှတျခလြို့ ကိုယျ့ရဲ့ ရှငျသနျမှုနဲ့ ပြျောရှငျမှုကို ရှေးခယျြလိုကျတယျ ။
ကဲ ကိုယျမစားနိုငျတဲ့ ကိုယျနဲ့ အသုံးမဝငျတဲ့ သဈသားပနျးသီးကို ရငျမှာ ပိုကျပွီး တကယျ စားနိုငျတဲ့ သဈသီးပငျအောကျမှာ သပှေဲဝငျတယျ ဆိုတာ တကယျတော့ မဖွဈသငျ့ဘူး မဟုတျလား ။ ဒါဆို ကြှနျတျောတို့ ဘဝမှာရော မြောကျကလေးလိုပဲ ဘာတှကေို သယျဆောငျထား မိကွပါလိမျ့ ။
စညျးစိမျ ဥစ်စာတှလေား ၊ စိုးရိမျ ကွောငျ့ကမြှုတှလေား ၊ စိတျပကျြ ဝမျးနညျးစရာတှလေား ၊ မာနျမာနတှလေား ၊ ဘှဲ့ထူး ဂုဏျသိမျတှလေား တခုခုကိုတော့ သယျဆောငျပွီး တောအုပျထဲ ကြှနျတျောတို့ လြှောကျသှားနမေိ ကွတယျ။
လှတျခသြငျ့တဲ့ အရာကို လှတျခသြငျ့တဲ့ အခြိနျမှာ လှတျခနြိုငျမှ သာလြှငျ တကယျ့ ပြျောရှငျမှုကို ကြှနျတျောတို့ ခံစားနိုငျလိမျ့မယျ ။
မျောက်ကလေး နှင့် သစ်သားပန်းသီး
ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက တောအုပ်တခုထဲမှာ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ မျောက်တကောင်ရှိတယ် ။ သူဗိုက်ဆာလာတဲ့ အခါ အရသာရှိတဲ့ သစ်သီးတွေ စားလို့ သူမောလာတဲ့အခါ အနားယူလို့ အဲဒီ တောအုပ်ထဲမှာပဲ ပျော်မွေ့နေခဲ့တယ် ။ တနေ့တော့ သူဟာ မျက်စိလည် လမ်းမှားရင်း အိမ်တလုံးဆီ ရောက်လာခဲ့တယ် ။
အဲဒီမှာ သူမြင်လိုက်ရတာက အရမ်းကို လှပတဲ့ ပန်းသီးတွေ ထည့်ထားတဲ့ ပန်းကန်လုံးကြီးကို ပေါ့ ။ မျောက်ကလေးဟာ အိမ်ရှင်တွေ အလစ်မှာ လက်တဖက်ကို ပန်းသီးတလုံးစီ ယူပြီး တောအုပ်ထဲ ပြန်ပြေးလာခဲ့တယ် ။
မျောက်လေးဟာက ပန်းသီးကို နှာခေါင်းရှုံ့ပြီး အနံ့ခံတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဘာအနံ့မှ မရဘူး ။ ပြီးတော့ ပန်းသီးကို စားဖို့ ကြိုးစားတယ် ။ ဒါပေမယ့် သူ့သွားတွေ နာကျင်ပြီး စားမရလောက်အောင် မာကြောနေတယ် ။ ပန်းသီးတွေဟာ တကယ်တော့ သစ်သားနဲ့ ပြုလုပ်ထားတာ ဖြစ်တယ် ။ ဒါပေမယ့် သူတို့က အရမ်းလှတယ် ။
တခြားမျောက်တွေကလည်း အဲဒီပန်းသီးတွေ မြင်တဲ့အခါ အလုအယက် ပြေးယူဖို့ လာကြတယ် ။ အဲဒီအခါ ပန်းသီးပိုင်ရှင် မျောက်ကလေးက သူ့ပန်းသီးတွေကို တင်းကြပ်စွာ ပွေ့ဖက်ထားလိုက်တယ် ။ ပြီးတော့ သူဟာ ဒီတောထဲမှာ သူ့ရဲ့ ပန်းသီး ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက် ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွား နေခဲ့တယ် ။
ပန်းသီးတွေက နေရောင်နဲ့ ကြည့်တဲ့အခါ နီရဲ တောက်ပြောင်နေပြီး သူ့ကို ပြည့်စုံအောင် လုပ်ပေးနေတယ်လို့ မျောက်ကလေး ခံစားနေရတယ် ။ ပန်းသီတွေကိုပဲ သူဂရုတစိုက် ကြည့်နေပြီး ပထမဆုံး သူဆာလောင်နေတာ ကိုတောင် မေ့လျော့သွား ခဲ့တယ် ။
သစ်သီးပင် တပင်က မျောက်ကို သတိပေးတယ် ။ ဒါပေမယ့် သူ့လက်ထဲက ပန်းသီးတွေက လွဲလို့ မျောက်ကလေးဟာ ဘာကိုမှ ဂရုမစိုက်ဘူး ။ သူစားဖို့ သစ်သီးခူးဖို့ အတွက် သူ့လက်ထဲက ပန်းသီးတွေကို မြေပြင်ပေါ် ခဏချရမှာ ကိုတောင် သူမချနိုင် ဖြစ်နေခဲ့တယ် ။
တကယ်တော့ သူ နားလည်း မနားရသလို သူ့ပန်းသီးတွေကို တခြားမျောက်တွေ လာလုယူမှာ စိုးတဲ့အတွက် အချိန်တိုင်း ကာကွယ်နေ ရတယ် ။ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားမှု တခုအတွက် အရင်က ပျော်ရွှင်နေတဲ့ မျောက်ဟာ ပျော်ရွှင်မှုတွေ နည်းလာပြီး သစ်တော တလျှောက်မှာ လျှောက်သွားနေ ခဲ့ရတယ် ။
ပန်းသီးတွေဟာ တဖြည်းဖြည်း လေးပင်လာသလို ခံစားလာရတယ် ။ သနားစရာကောင်းတဲ့ မျောက်ဟာ ပန်းသီးတွေကို လွှတ်ချလိုက်ဖို့ အတွက် စဉ်းစားတယ် ။ သူ မောနေပြီ သူ ဆာနေပြီ နောက်ဆုံး သစ်သီးပင်ပေါ် တက်လို့ သစ်သီးတွေ သူ မခူးနိုင်တော့ဘူး ။ သူ့လက်ထဲမှာ စားလို့မရတဲ့ ပန်းသီးတွေနဲ့ပဲ ပြည့်နေခဲ့တယ် ။
အကယ်၍ သူ့လက်ထဲက ပန်းသီးတွေကို လွှတ်ချလိုက်ရင် သူ ဘာဆက်ဖြစ်မလဲ ? သူ့လက်ထဲ သယ်ဆောင်ထားတဲ့ ပန်းသီးတွေက ရူးသွပ်မှုတွေပဲလို့ သူမြင်လာတယ် ။ သူ အရမ်းလည်း ပင်ပန်းနေခဲ့ပြီး နောက်ဆုံး အသီးပင်နား ရောက်တဲ့အခါ အဲဒီအပင်က သစ်သီးရနံ့တွေကို သူ ရှုရှိုက်ရင်း သူအရာရာကို နားလည် သဘောပေါက်သွားတယ် ။
သူ့လက်ထဲက သစ်သားနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ပန်းသီးတွေကို သူ မြေပြင်ပေါ် ပစ်ချလိုက်ပြီး သူ့အစာအတွက် သစ်သီးပင်ပေါ် တက်သွားတယ် ။ သူ အခု ပြန်ပြီး ပြုံးပျော်နိုင်ပါပြီ ။
မျောက်ကလေးလိုပဲ ကျွန်တော်တို့ဟာ တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ ထင်မိတဲ့ အရာတွေကို ကျွန်တော်တို့ ဘဝတလျှောက်လုံး သယ်ဆောင်ထား ကြတယ် ။
ဒီပုံပြင်လေးရဲ့ အဆုံးက ၂ ခု ဖြစ်နိုင်တယ် ။ မျောက်ဟာ နောက်ဆုံး သစ်သီးပင် အောက်မှာ သူ့ပန်းသီးတွေကို မစွန့်ပယ်နိုင်လို့ ရင်မှာ ပိုက်ရင်း သေပွဲဝင်သွား ခဲ့တယ် ။ နောက်တခု ကတော့ ကျွန်တော်အပေါ် မှာရေးခဲ့သလို ပန်းသီးတွေကို လွှတ်ချလို့ ကိုယ့်ရဲ့ ရှင်သန်မှုနဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကို ရွေးချယ်လိုက်တယ် ။
ကဲ ကိုယ်မစားနိုင်တဲ့ ကိုယ်နဲ့ အသုံးမဝင်တဲ့ သစ်သားပန်းသီးကို ရင်မှာ ပိုက်ပြီး တကယ် စားနိုင်တဲ့ သစ်သီးပင်အောက်မှာ သေပွဲဝင်တယ် ဆိုတာ တကယ်တော့ မဖြစ်သင့်ဘူး မဟုတ်လား ။ ဒါဆို ကျွန်တော်တို့ ဘဝမှာရော မျောက်ကလေးလိုပဲ ဘာတွေကို သယ်ဆောင်ထား မိကြပါလိမ့် ။
စည်းစိမ် ဥစ္စာတွေလား ၊ စိုးရိမ် ကြောင့်ကျမှုတွေလား ၊ စိတ်ပျက် ဝမ်းနည်းစရာတွေလား ၊ မာန်မာနတွေလား ၊ ဘွဲ့ထူး ဂုဏ်သိမ်တွေလား တခုခုကိုတော့ သယ်ဆောင်ပြီး တောအုပ်ထဲ ကျွန်တော်တို့ လျှောက်သွားနေမိ ကြတယ်။
လွှတ်ချသင့်တဲ့ အရာကို လွှတ်ချသင့်တဲ့ အချိန်မှာ လွှတ်ချနိုင်မှ သာလျှင် တကယ့် ပျော်ရွှင်မှုကို ကျွန်တော်တို့ ခံစားနိုင်လိမ့်မယ် ။